पर्खाइका प्रविधि- विज्ञान र प्रविधि - कान्तिपुर समाचार
पुस ११, २०७६ हेलो शुक्रबार
सन् २०१९ मा प्रविधिको नयाँ आविष्कार धेरै भएन  । तर यो वर्ष प्रविधिका हिसाबले रोचक भने रह्यो  । प्रविधिको ठूलो आविष्कारभन्दा पनि प्रविधिको लडाइँका कारण यो वर्षको सम्झना रहन्छ । तर, आगामी वर्ष भने योभन्दा स्थिति फरक हुनेछ । कुन नयाँ प्रविधि आविष्कार होलान् भनेर त अनुमान गर्न सकिन्न ।
तर, अहिले विकासक्रममा रहेका प्रविधिले कस्तो फड्को मार्लान् भन्ने अनुमानचाहिँ गर्न सकिन्छ ।
अहिलेकै विकासक्रमलाई आधार मान्ने हो भने आगामी वर्ष फाइभजी विकासको वर्ष हुनेछ । चीन, अमेरिका, बेलायतसहित अधिकांश देशले यसको विकासका लागि गरेको लगानी र फाइभजी विकासका लागि प्रविधि कम्पनीले देखाएको चासोका कारण आगामी वर्ष फाइभजी विस्तारको वर्ष हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । फाइभजीले मोबाइल प्रविधिलाई द्रुत बनाउने मात्रै नभई यसले अन्य सम्भावनाको ढोकासमेत खोल्नेछ । अहिले चलनमा रहेको फोरजी प्रविधिभन्दा निकै द्रुत गति हुने भएकाले फाइभजीले प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातदेखि हरेक क्षेत्रमा इन्टरनेटको भूमिकालाई यसले बढावा दिनेछ ।
सन् २०१९ भरि चिनियाँ कम्पनी हुवावे र अमेरिकी सरकारबीच तथा अमेरिकी कम्पनीबीचको सम्बन्ध चिसोपन भए पनि यसले प्रविधिको प्रतिस्पर्धालाई थप बढाउनेछ । अमेरिकी कम्पनी गुगलको स्वामित्व भएको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीले भविष्यमा आफ्नै सफ्टवेयर इकोसिस्टम बनाउने घोषणा गरेको छ । यसले संसारभरका डेभलपरलाई सम्भावनाको थप ढोको खोल्नेछ नै, योबाहेक प्रयोगकर्तालाई नयाँ अनुभव दिने विषयमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने र यसको फाइदा प्रयोगकर्ताकै लागि बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पछिल्ला वर्षमा विकास भएका नयाँ प्रविधि मोबाइलमा बढी केन्द्रित छन् । फाइभजी त्यसको एउटा उदाहरण हो । तर, स्मार्टफोन आफैं भने बोरिङ हुँदै गएको छ । स्मार्टफोनहरु क्यामेरा केन्द्रित हुँदै गएको र प्रयोगकर्तालाई नयाँ लाग्ने खालका फिचर कम हुन थालेको गुनासो सर्वत्र छ । यद्यपि सस्ता र महँगा फोनको विकल्प बजारमा धेरै छन् ।
यस्तै बोरिङ स्मार्टफोनलाई आकर्षक बनाउन सक्ने अर्को प्रविधि पट्याउन मिल्ने वा लचकदार स्क्रिन पनि हो । यो प्रविधि मोबाइलमा मात्रै नभएर टेलिभिजन र स्क्रिन प्रयोग हुने अधिकांश डिभाइसका लागि उपयोगी हुन्छ । तर, स्मार्टफोनका लागि यसको बढी नै उपयोगिता हुनेछ किनकि स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको खल्तीमा रहने वस्तु हो । आफ्नो साथमा हुने चीज जति आकर्षक भयो प्रयोगकर्ता उति नै खुसी हुने पक्का छ ।
यो वर्ष पट्याउन मिल्ने स्क्रिनका लागि धेरै उत्साहप्रद भएन । यो वर्ष भएका गल्तीका कारण अर्को वर्ष यो सुधारिने र धेरै उपयोगी प्रविधि बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि अधिकांश स्मार्टफोन निर्माता यसका लागि इच्छुक छन् र प्रयोगकर्ताको रूचि पनि यसमा छ ।
पट्याउन मिल्ने खालको स्मार्टफोनमा प्रयोगकर्ताको रूचि कति छ भन्ने कुरा सामसङ फोल्डको उदाहरणबाट पनि थाहा हुन्छ । यो वर्ष सामसङले फोल्डेबल फोनको बिक्री सुरूवात गर्नेबित्तिकै अर्डर सकिएको थियो । यद्यपि सामसङका लागि यो सुखद अनुभूति भने हुन सकेन । फोनमा समस्या देखिएपछि उसले धेरै आलोचना खेप्नुपर्‍यो । २ हजार डलरभन्दा बढी मूल्य पर्ने फोनमा उपभोक्ताले देखाएको रूचिले पनि यसको भविष्य छ भन्ने संकेत गर्छ ।
फोल्डेबल स्क्रिन भएको फोन निर्माणका लागि एप्पलले प्याटेन्ट राइट दर्ता गरिसकेको छ भने हुवावे, साओमी, मोटोरोलाजस्ता कम्पनीले यसमा अनुसन्धान र विकास गरिरहेका छन् । यो प्रविधिले सफलता हात पारेमा स्मार्टफोनहरु कहिले साना र आवश्यकताअनुसार ठूला बनाएर बोक्न र काम गर्न मिल्नेछ ।
भविष्य कसलाई के थाहा ? ल्यापटप नै मोबाइल जसरी पट्याएर पो हिँड्न मिल्छ कि ? योबाहेक साना स्याटलाइट पनि आगामी वर्ष चर्चाको विषय हुनेछ । साना स्याटलाइट राख्ने अमेरिकी टेस्लाको योजनामा अन्य कम्पनीहरु पनि सामेल भइसकेका छन् । आधा दर्जन कम्पनीहरुले अन्तरिक्षको तल्लो तहमा साना खालका स्याटलाइट राखेर द्रुत गतिको इन्टरनेट वितरण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । यस्ता स्याटलाइट सस्ता त हुन्छन् नै, स्याटलाइटको व्यापकताले इन्टरनेटको पहुँच र गतिलाई पनि धेरै माथि लैजानेछ । यद्यपि सन् २०२० यस्ता स्याटलाइटको विस्तार र परीक्षणको वर्ष हुनेछ ।
प्रकाशित : पुस ११, २०७६ १०:३०
भूकम्पले ४९० विद्यालय भवनमा क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसमध्ये १७६ व्यवस्थापन समिति, ३५ दातृ निकाय र ९० गैरसरकारी निकायमार्फत निर्माण भए ।
पुस ११, २०७६ हरिराम उप्रेती
(गोरखा) — भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्दै गर्दा गोरखा नगरपालिका–७ को नवज्योति मावि डण्डी डाँडाको भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले निर्माण गरिदिएको भवन सुविधा सम्पन्न छ । अव केही दिनमै नयाँ भवनबाट पठनपाठनको तयारी भइरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवराम कट्टेलले बताए ।
‘असुरक्षित भनेर स्टीकर टाँसेको कक्षामा ८ देखि १० कक्षाका विद्यार्थी पढाइरहेका छौँ, अरु कक्षा पनि पुरानै भवनबाट चलाइरहेका थियौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ भवन बन्यो, अब केही दिनमै सर्छौं ।’
यहाँ ४ वर्षदेखि टहरो र अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा चलेका कक्षा अहिले धमाधम नयाँ भवनमा सर्न थालेका छन् । भूकम्पले ४ सय ९० विद्यालय भवनमा क्षति पुर्‍याएको थियो । तीमध्ये ३ सय १ विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) का प्रमुख विष्णुप्रसाद मिश्रले बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत १ सय ७६, दातृ निकायबाट ३५ र गैरसकारी निकायमार्फत ९० विद्यालय पुनर्निर्माण भएको उनले बताए । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) ले व्यवस्थापन समितिमार्फत भवन निर्माण गरेको छ । त्यसमध्ये ७६ विद्यालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उनले सुनाए ।
समितिमार्फत बनेका ५८, दातृ निकायबाट बनेका १५ र गैरसरकारी संस्थामार्फत बनेका ३ विद्यालयका भवन अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए । ४६ विद्यालय भवन भने निर्माणाधीन छन् । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने । पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका केही विद्यालयमा कक्षाकोठा अझै अभाव देखिएको उनले बताए । ‘कक्षाकोठा अपुग विद्यालयको पनि लगत संकलन गर्दैछौँ,’ उनले भने ।
जाइकाले मात्र ६१ विद्यालय भवन निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तीमध्ये ४९ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । ‘सम्पन्न हुन बाँकी १२ विद्यालयको काम पनि माघ मसान्तभित्र सकिन्छ,’ उनले भने । एसियन विकास बैंकले जिम्मा लिएको ४ विद्यालयको टेन्डर प्रक्रिया चलिरहेको उनले बताए । एसियन विकास बैंकले १५ विद्यालय भवन प्रबलीकरणका लागी जिम्मा लिएपनि काम सुरु गरिसकेको छैन ।
छिमेकी राष्ट्र भारतले जिम्मा लिएको ७ मध्ये ३ निर्माणाधीन छन् भने चार वटा टेन्डर प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । चीन सरकारले जिम्मा लिएको सिंजाली माविको भवन निर्माण भने अझै अन्यौल छ । चीन सरकारको ढिलाइले सिंजालीका विद्यार्थी अस्थायी टहरोमा अध्ययन गर्न वाध्य छन् । चाडो पुनर्निर्माण गर्न पहल भइरहेको ताक्लुङका ध्रुव खनालले बताए । संघसंस्थाले जिम्मा लिएका १८ मध्ये १४ को निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । भूकम्पपछि बनेका अधिकांश भवन अपाङ्गमैत्री रहेको समेत मिश्रले बताए । ‘जाइकाले बनाएको विद्यालय भवनमा बिजुली, सवै कक्षाकोठामा फ्यान, ल्याब र लाइबेरीका कोठा छन्,’ मिश्रले भने, ‘छात्रछात्राका लागी छुट्टाछुट्टै ब्लगमा शौचालय र अपाङ्गता भएकालाई र्‍यामसहितको शौचालय बनेका छन् ।’
सामान्यतया १२ कक्षासम्म पढाइ हुने माविका लागि २४, दस कक्षासम्म चलेका माविका लागि १८, निमाविलाई १२ र प्राविका लागि आठ कक्षाकोठाको आवश्यकता पर्ने मिश्रले बताए । ‘जग्गाको प्रकृति, विद्यार्थी संख्या र विद्यालयको प्रकारको आधारमा भवन निर्माण गरेका हौँ,’ उनले भने । यहाँ निर्माणाधीन र वन्न वाँकी विद्यालयका विद्यार्थी अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा अध्ययन गर्दै आएका छन् । टहरो मुनि बस्दा जाडोमा शीत चुहिने र गर्मीमा जस्ता तातेर बस्न नसकिने विद्यार्थीको गुनासो छ । विद्यालयको भवनले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने शिक्षकको गुनासो छ ।
विद्यालयको पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण गर्दा गुणस्तरीयता कायमका लागि अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्रभावकारतिाका साथ भइरहेको उनले बताए । ‘भूकम्पपछि खुल्ला आकाश मुनि रहेका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठा स्थानान्तरण गर्ने र सामुदायिक विद्यालयलाई भौतिक रूपमा सुदृढ, सुरक्षित र बालमैत्री विद्यालय निर्माण गर्ने भन्ने छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : पुस ११, २०७६ १०:२९